PAN AESTHETIC | Beauty MM
PAN Aesthetics မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်
လှပမှုနဲ့ နုပျိုငယ်ရွယ်မှုတို့ကို ဒွန်တွဲပြီးရရှိသွားလိုက်တာ!
အချိန်တွေ၊ အသက်တွေကို ဘယ်သူကမှ ရပ်တန့်တားဆီးထားနိုင်စွမ်းမရှိပေမယ့် ရုပ်ရည်ကိုတော့ အိုစာမလာအောင် Dr. Laurel ကတားထားပေးနိုင်ပါတယ်နော်
ကျွန်မရဲ့ ခံယူချက်ကတော့လေ လူတစ်ယောက်ကို တခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ တူသွားအောင် ပြုပြင်ပေးလိုက်ရတာမျိုးကို မကြိုက်နှစ်သက်ပါရှင်.. မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရှိရင်းဆွဲအလှကို ပိုပြီးထင်းလင်းပီပြင်လာအောင် ဖော်ကျူးပံ့ပိုးပေးရတာမျိုးကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်ရှင် !!!
♡♡အမြဲတမ်းယုံကြည်စွာနဲ့ လာရောက်ကုသမှုခံယူသော မိတ်ဟောင်းများအားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.. မိတ်သစ်များကိုလည်းကြိုဆိုလျက်ပါနော်♡♡
♡Beauty builds self-confidence regardless of age & gender .♡
📞 ဘိုကင်တင်ရန် : : 09770013077
⌚ ဆေခန်းဖွင့်ချိန် : : 10am-8pm 🕙 –> 🕗
⌚ ဆရာဝန်ထိုင်ချိန်: : 12pm-7pm 🕛 –> 🕖
👩‍ ဆရာဝန် : : Dr. Laurel
2G, တာဝါB, တော်ဝင်ဆင်မင်းကွန်ဒို, ကမ်းနားလမ်းမကြီး (ဆင်မင်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်), အလုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
💦 မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးမှာ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအလယ် ဝင့်ကြွားလှပကျော့ရှင်းနေစေဖို့ မဟာ Promotion ကြီး up to 35% 💦
‘ဝမှလှ’ ဆိုတဲ့ 1950s လောက်က အယူအဆတွေ 2000sမှာတော့ လုံးဝပြောင်းပြန်ပဲ..
ကိုယ်ခန္ဓာဝရင် ဖိုင့်ရင် အထစ်အခေါက်တွေရှိရင်၊ မျက်နှာကြီးရင် ကားရင် ၊ မေး၂ထပ်ရှိနေရင် …
ပိန်သွယ်ချပ်ကပ်သူတွေထက် အလိုလိုနေရင်း အသက်ပိုကြီးတယ်ထင်ရစေတယ်..
ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့ … ဒီခေတ်မှာတော့ မျက်နှာကြီးတွေကို သေးသေးပါးပါး သွယ်သွယ်လျလျ ဖြစ်အောင် PAN Aesthetics မှာ ခွဲစိတ်စရာမလိုပဲ ခေတ်မီ စက်ကြီးတွေ နဲ့ ဆေးတွေနဲ့ နာကျင်မှုအနည်းဆုံး ကုထုံးများကို ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ကုသပေးနေပြီး
ယခု ဒါတွေအားလုံးကို ℹMarch 12 ~ 20 ℹအတွင်း discount (up to 35%) ချပေးထားပါတယ်..
PAN Aesthetics တွင် ရရှိနိုင်သော Service များကတော့
❄️　Meso Melasma ( တင်းတိတ်ကုထုံး)
❄️　Meso Collagen ( အသားအရေတင်းရင်းနုပျိုစေသည့်ကော်လဂျင်ကုထုံး)
❄️　Meso Botox ( အရေးကြောင်း အသေးများအတွက် ကုထုံး)
❄️　Lipo Lift ( ပါးအဆီချ V shape ကုထုံး)
❄️　Lipo Doublechin ( မေးနှစ်ထပ်အဆီဖျော်ကုထုံး)
❄️　Collagen thread rejuvenation ( ကော်လဂျင်ကြိုးလေးများဖြင့် နုပျိုတင်းရင်းစေခြင်း)
❄️　Advanced Korean Collagen Thread Lifting ( ကော်လဂျင်ကြိုးဖြင့် မျက်နှာ shape ကို ပြုပြင်ပေးခြင်း)
❄️　Advanced Korean Collagen Nose Threading ( ကော်လဂျင်ကြိုးဖြင့် နှာခေါင်း shape ပြုပြင်ပေးခြင်း)
❄️　Total Hair Rejuvenation ( ဆံပင်ပေါက်ကုထုံး )
❄️　Brightening Injection ( Glutathithione + 1 Vitamin )
❄️　Whitening Booster Cocktail ( Glutathione +2Vitamins Drip)
❄️　Antioxidant Booster Cocktail ( Glutathione +2Vitamins + Switzerland Collagen Drip )
❄️　Pan’s Cocktail ( Glutathione Switzerland Collagen + Multivtamins Drip )
❄️　Plasma Rejuvenation ( သွေးရည်ကြည်ကုထုံး)
( face, neck & hands)
❄️　အရေပြား stem cell များကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ cell အသစ်များဖြစ်စေခြင်း collagenအသစ် များထွက်ကာ အသားရေ တင်းရင်းနုပျိုစေခြင်း၊ ၀က်ခြံကြောင့်ကျန်ခဲ့သော ချိုင်ခွက်များ ဖြည့်ပေးခြင်း၊ smile Line စောစောမပေါ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
❄️　ဆံပင်ကျွတ်လွန်သော/ မကျန်းမာသော ဦးရေကို ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေရန် ဆံပင်များ ပြန်လည်သန်စွမ်းလာခြင်းကို မိမိ၏ သွေးရည်ကြည်ဖြင့် ကုသခြင်း
❄️　Chemical Peeling
❄️　Whitening Peeling
❄️　မျက်နှာ၊ ချိုင်း၊ တံတောင်ဆစ်၊ ကျော၊ ဒူးခေါင်းမဲနေခြင်းကို ကုသပေးခြင်း။
❄️　Acne Peeling (၀က်ခြံကုသခြင်း)
❄️　၀က်ခြံများအား ကုသပေးခြင်း၊ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေခြင်းနှင့် မျက်နှာကြည်လင်စေခြင်း။
❄️　Pigment Peeling
❄️　တင်းတိတ်နှင့် ၀က်ခြံအမာရွတ်အမည်းများအား ကုသပေးခြင်း။